Mucjisooyinka loogu talagalay in lagu yareeyo Cabirka Slim
Jimicsi Miisaanka waa lagaa qaadayaa xeerarka
Acupuncture waxay bilowday in si ballaaran loo isticmaalo bogsiyayaashii hore ee Shiinaha - waxay heleen qiyaastii 170 dhibcood oo boogoogo ah oo dhagaha dhagaha ah, jirka oo dhanna waxaa jira in ka badan 600. Maanta, aqoontan waxaa loo isticmaalaa labadaba bogsashada cuduro kala duwan iyo miisaan lumis. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee horumarinta miisaanka - hoos u dhigga magnets Slim Clips.
Maxay yareeyaan biomagnet si loo yareeyo miisaanka?
Qalabka dabiiciga ah ee dibedda loo yaqaan 'Clim Clips' waa mid aad u yar - kaliya 7 mm dhexroor, waxay miisaankoodu yahay 1 garaam. Marka aad xiran tahay biomagnets, qofku ma dareemo raaxo la'aan, waana ay adagtahay in lumiyo. waxay si fiican u taagnaayeen. Qofka dibedda ah si uu u dareemo magnets Clim Clips dhegta waa wax aan macquul ahayn iyadoo ay ugu wacan tahay qiyaasta yaryar oo aan midab lahayn.
Saameyn ku yeelashada dhibcaha firfircoon ee ururrada, dhejisyada magnets Slim Clips waxay gacan ka geysataa sidii caadiyan loo hormarin lahaa hoormoonka asalka, dardar-gelinta dheef-shiid kiimikaadana yareeyo cunto xumida, si miisaanka loo yareeyo dabiiciga, iyada oo aan lahayn xannibaadyo daran iyo raaxo la'aan.
Soo-saareyaasha hir-gelinta Biomagnets Slim Clips ayaa sidoo kale xusuusta tiro ka mid ah faa'iidooyinka kale ee horumarkan:
Isticmaalka biomagnets kuma koobna da'da, waa la gashan karaa dhallinyarada iyo dadka waayeelka ah, marka habab kale oo badan oo miisaanka loo lumiyo waa mamnuuc ama aan waxtar lahayn;
Si ka duwan noocyo badan oo aan la aqoonsan, waxay ku salaysneyn daraasado muujiyay waxtarkooda iyo amniga;
Qiimaha Magalooyinka Slim Clips waa mid aad u macquul ah dadka caadiga ah;
magnets waa sahlan tahay in la isticmaalo.
Sidee loo qabtaa Saamilada Slim-qabadka ee miinooyinka lagu shaqeynayo?
Farsameynta ficilada biomagnets waxaa lagu sharaxay farsamoyaqaannada soo socda: marka cirbadda la dhigo meesha la rabo ee duufaanta, waxay billaabaysaa inay maskaxda ku iftiimiso maskaxda in jidhku leeyahay dhibaatooyin miisaan xad dhaaf ah. Maskaxdu waxay ka jawaabtaa calaamadahaas iyagoo sii deynaya quustada hoormoonada ee dib u dhiska shaqada iyo nidaamka.
Horumarinta habka codsigu waxay ku andacoonayaan in sidan ay suurtogal u tahay in laga takhaluso 20 kg oo culeyskiisu ka badan yahay bil gudaheed. Si kastaba ha noqotee, shaki badan ayaa ku hadla oo kaliya saameynta placebo. Laakiin, inkastoo ay jiraan fikrad kale oo xun, dad badan ayaa iibsanaya maadooyinka Slim Clips oo miisaan lumis ah.
Sidee loo dalbadaa muraayadaha ba'an ee loo yaqaan 'Clim Clips'?
Habka loo adeegsado biomagnets waa mid sahlan waana lagu sharraxay si faahfaahsan buuggan. Afar dhuumo yaryar oo yar ayaa ku yaala xuduudaha laba - gudaha iyo dibedda. Iyaga ayaa lagu wadaa in lagu qabto jimicsi wadaag ah. Cilmi-baaristu waa inay ku taallaa qodobbada lagu tilmaamay tilmaamaha. Gasho magnets Clim Clips 6 saacadood maalintii, ugu fiicnaanshaha - laga bilaabo subaxdii ilaa casho.
Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in macaamil-bixiyeyaashu ay hoos u dhigaan magnim-kumbiyuutarrada aan lahayn cunto iyo jimicsi, is-beddelka cuntada iyo hab-nololeedka waa in weli la soo bandhigaa. Waxaan u baahannahay inaan isku dayno inaan raacno qiyaasta kalooriga , ka saar raashinka dufanka leh iyo cuntooyinka macaan, ka soo saar cunnooyinka goor dambe. Iyada oo la isticmaalayo biomagnets, cunto yari ayaa si tartiib tartiib ah hoos u dhacaya, markaa waxaad u baahan tahay inaad dhegaysato jirkaaga iyo si tartiib tartiib ah u yareeya qaybaha qaybaha, oo aan cunin caado ka badan intii loo baahnaa.
Intaa waxaa dheer, waxay fiicnaan doontaa in kor loo qaado dhaqdhaqaaqa. Ma aha lagama maarmaan in aad si xoogan u tababbarto tijaabiyeyaasha, lakiin jimicsi yar, jimicsi jimicsi, jimicsi subax ama habeenkii fiidkii ma ka hortagi doonto, laakiin waxay dardar gelinaysaa helitaanka isafgaradka la doonayo.
Contraindications si loo isticmaalo majaajilada majaajilada Saacadaha Slim
Ka hortagga isticmaalka biomagnets ee miisaan lumisku waa mid aad u yar - tani waa uurka, naas nuujinta iyo da'da carruurta, tk. xilliyadaas, miisaan culus ayaa ah mid aad u macquul ah. Ma jiraan wax saameyn ah oo ku dhaca maaskiyada Slim Clips.
Tababarada Dhimista Miisaanka
Sidee lumisaa miisaanka 2 maalmood?
Tincture canaasiga ah miisaanka luminta
Saliidaha muhiimka ah ee miisaanka lumay
Sidee luminaysaa miisaannada dadka?
Jilbada shaaha "Liqidda afkaarta"
Sidee lumisaa miisaanka gabadh?
Sidee loo nadiifiyaa jirka oo lumiyaa miisaanka?
Ozonoterapy daaweynta miisaanka
Fataha caloosha - sababaha
Maxaa la cabbo si aad miisaanka u dhinto?
Saliida Thistle ee miisaan lumis
Yogalosophy, sida beddelaad xoog leh oo tababar ah
Madonna waxeey cabtaa oo qarka u saaran tahay burburka qotada
Dhexdhexaadinta qaab-dhismeed ee habdhaqanka
Dharka dharka-dharka - qaababka ugu casrisan iyo waxa la xidho?
Bandhigyada casriga ah waxay cambaareeyeen taxanaha "saaxiibo" cunsurinimada, nacaybka iyo jinsiga
Sifooyinka nafsiga ah ee nafsiyan ah
Dhammaystiridda loggia - fikradaha la taaban karo iyo xiisaha leh ee isticmaalka qalabka
Carbohydrates degdeg ah oo gaaban
Soo bandhigida Pelvic
Shimmer: iftiinka qoyan ee maqaarka quruxda badan
Mark Zuckerberg iyo Priscilla Chan
Dharka Shiinaha Hore
Sidee loo doortaa borotiinka?
Daaweynta caloosha iyo mindhicirrada daaweynta dadka
11 cilmibaadhayaal haweeney ah oo isbeddelay adduunkan
Tom Ford waxa uu ka hadlayey cabsida maandooriyaha iyo cabsida ah in uu lumiyo wiil
Kabaha haweenka ee Timberland
Garnet - faa'iido iyo waxyeelo u geysta caafimaadka ragga iyo dumarka
Uurka bil kasta - sida loo ogaado?
Sonkor - wanaagsan iyo xun